प्रदेशस्तरीय ब्याड्मिन्टनमा सुजन र प्रनिशसिंह प्रथम - पूर्णपुष्टि
प्रदेशस्तरीय ब्याड्मिन्टनमा सुजन र प्रनिशसिंह प्रथम
पूर्णपुष्टि, मंसिर १४ गते ।
सुजन श्रेष्ठ (धरान) र प्रनिशसिंह ठकुरी (झापा) को जोडीले उदयपुरमा भएको १ नं. प्रदेश स्तरीय व्याड्मिन्टन प्रतियोगिताको उपाधि सनिबार जितेका छन् ।
त्रियुगा नगरपालिकाको मुख्य प्रायोजन तथा जिल्ला ब्याड्मिन्टन संघ उदयपुरको आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा रविन साउदेन (धरान) र प्रकाश राई (दमक) लाई फाईनल खेलमा पछि पार्दै श्रेष्ठ र ठकुरीको जोडीले उपाधी हात पारेको हो । प्रतियोगिताको मेन्स डबल्स खुल्लातर्फ उपाधी हात पारेसंगै उनीहरुले नगद पुरस्कार तीस हजारसहित शिल्ड, मेडल र प्रमाण पत्र हात पारेका छन् ।
साउदेन र राईको जोडीले दोस्रो स्थानमा चित्त बुझाउदै पच्चीस हजार नगद पुरस्कारसहित शिल्ड, मेडल र प्रमाणपत्र हात पारेका छन् । सो खेलतर्फको तेस्रो स्थान उदयपुरका सरोज खवास र हिमाल श्रेष्ठको जोडी तथा भोजपुरका विसाल तामाङ र प्रमिस श्रेष्ठले हात पारेका छन् । उनीहरुले जनही पाँच हजार नगद पुरस्कारसहित शिल्ड, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् ।
त्यसैगरी प्रतियोगिताको ४५ वर्षमाथिका भेट्रान्स खेलतर्फ उदयपुरका चित्र थापा र बलबहादुर कार्कीको जोडीले प्रथम स्थान हाँसिल गरेका छन् । उनीहरुले पच्चीस हजार रुपैया नगद पुरस्कार सहित शिल्ड, मेडल र प्रमाणपत्र हात पारेका छन् । उनीहरुले धनकुमार श्रेष्ठ (खोटाङ) र इन्द्र योङहाङ (पाँचथर) लाई फाईनल खेलमा पछि पारेका थिए ।
श्रेष्ठ र योङहाङको जोडीले दोस्रो स्थानमा चित्त बुझाउनु पर्यो । उनीहरुले बीस हजार नगद पुरस्कारसहित शिल्ड, मेडल र प्रमाणपत्र हात पारेका छन् । सो खेलमा तेस्रो स्थानमा मोरङका भुपाल प्रसाई र विकास श्रेष्ठको जोडी तथा ताप्लेजुङका दिपक लिम्बु र धनेन्द्र लिम्बुको जोडी भए । उनीहरुले जनही पाँच हजार नगद पुरस्कारसहित शिल्ड, मेडल र प्रमाण पत्र पाएका छन् ।
प्रतियोगिताकै सिलसिलमा भएको जिल्ला स्तरीय खेलमा भने सुवास भटटराई र सरोज खवासको जोडी प्रथम, दिपक खनाल र नगेन्द्र दाहालको जोडी दोस्रो भएका छन् । खनाल जिल्ला न्यायधिस र दाहाल राष्ट्रिय अनुसन्धान, कार्यालय उदयपुरका उपनिर्देशक हुनुहुन्छ । जिल्ला स्तरीय खेलको तेस्रो स्थानमा भैरव थापा र ललित नायकको जोडी तथा दिपक राई र राजकुमार दनुवारको जोडी सफल भएका छन् । थापा रणसार्दुल गण, बोक्ससेका गणपति हुनुहुन्छ ।
एक समारोहकाबीच विजयी प्रतियोगिहरुलाई पुरस्कृत गरिएको थियो । २ र ३ नं. प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका खेलाडीहरुले भाग लिएको प्रतियोगिता भब्य र सभ्यरुपमा सम्पन्न भयो ।
Prevमिस उदयपुरको गाईघाट अडिसनमा १३ छनौट
Nextराजमार्ग जिर्ण भएको भन्दै बृहत अन्तरक्रिया कार्यक्रम